कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय ‘क्रिटिकल’, यस्तो बेला के गर्ने, के नगर्ने ? विज्ञहरुले दिए यस्तो सुझाव — Imandarmedia.com
कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय ‘क्रिटिकल’, यस्तो बेला के गर्ने, के नगर्ने ? विज्ञहरुले दिए यस्तो सुझाव
काठमाडाैं । कीर्तिपुरका एक ४२ वर्षीय स्थानीय पुरुषलाई सुरूमा सामान्य रूघाखोकीले समात्यो। तीन दिनपछि कोरोना परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ आयो। उनी घरको छिँडीमा छुट्टै कोठामा बस्न थाले।
चौथो दिन उनलाई हनहन्ती ज्वरो आयो। ज्वरो बढेर १०२ डिग्रीसम्म पुग्यो। खोकी पनि लाग्यो। तर, सिटामोल खाएको केही बेरमा ज्वरो कम हुन्थ्यो। उनी धेरै सिकिस्त देखिन्थेनन्। कोठाभित्र हिँडडुल र झ्याल–ढोकाबाट अरू मान्छेसँग कुराकानी गर्न गाह्रो भएन। छैठौं दिनसम्म आउँदा उनी बौरिसकेका थिए। ज्वरो ९८ थियो, रूघाखोकी निको भइसकेको थियो। उनी कोरोनाबाट मुक्ति पाइयो भनेर ढुक्क थिए।
उनलाई घरमै अक्सिजन दिन थालियो। अक्सिजन दिँदा ९० पुग्थ्यो, निकाल्दा फेरि घटिहाल्थ्यो। एक दिनभरि घरैमा राखेर अक्सिजन दिँदा पनि सुधार नभएपछि उनलाई कीर्तिपुर अस्पताल लगियो। पहिलो लक्षण देखिएको दसौं दिन उनी अहिले अस्पतालमा छन्। उनलाई नियमित अक्सिजन दिइएको छ। उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको परिवारका सदस्य बताउँछन्।
कोभिड–१९ को लक्षण व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ, तर जब यो भाइरसले गम्भीर रूप लिन्छ, तब धेरैजसो व्यक्तिमा उस्तै समस्या आउने गरेको पाइएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार, यो रोगका दुई चरण हुन्छन्। प्रत्येक चरण सामान्यतया एक साताको हुन्छ। अधिकांश बिरामीलाई एक साताभित्रै निको हुन्छ। जसको संक्रमण दोस्रो सातामा प्रवेश गर्छ, उसले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
‘जुन बिरामीले कुनै चिन्ताजनक लक्षणबिना १४ दिन कटाउँछन्, उसले कोभिडको जोखिमबाट पार पाउने सम्भावना बढी हुन्छ,’ न्यूयोर्क टाइम्समा उल्लेख छ। न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. लियोरा होर्विजको अनुभव पनि यस्तै छ।
दोस्रो सातापछि पनि कोभिडका बिरामीलाई थकान र शारीरिक कमजोरी हुनु सामान्य भएको उनी बताउँछिन्। डाक्टरहरूको अनुभवले के देखाउँछ भने, दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दा कतिपय कोभिड बिरामीलाई गम्भीर खालको निमोनियाले गाँजेको पाइएको छ। त्यस्ता बिरामीको छाती एक्सरे गर्दा दुवै फोक्सोको तल्लो तहमा काला धब्बाहरू देखिएका छन्। निमोनिया भइसकेका यस्ता बिरामीमा पनि अक्सिजनको मात्रा थाहा नपाउने गरी विस्तारै तल झरेको हुनसक्छ।
यस्तो अवस्थामा फोक्सोमा अक्सिजन प्रवाह बढाउन बिरामीले उत्तानो सुत्नु हुँदैन। उत्तानो सुत्दा फोक्सोमा अक्सिजन प्रवाह कम हुन्छ। घोप्टो परेर सुत्दा अक्सिजन प्रवाह बढ्छ। दायाँ–बायाँ कोल्टो परेर सुत्दा वा कुर्सीमा सिधा बस्दा पनि बिरामीलाई सजिलो हुन्छ। अक्सिमिटर नभएको अवस्थामा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने केही सरल विधि छन्। त्यसमध्ये एउटा विधि सास थामेर एक देखि ३० सम्म गन्नु हो।
यो विधि प्रमाणित भने होइन। यसले वास्तविक नतिजा नदिन सक्छ। कोभिड बिरामीका सन्दर्भमा यो विधि प्रभावकारी छ कि छैन भनेर अध्ययन पनि भएको छैन। अब हामी कोभिड–१९ का लक्षणको टाइमलाइन हेरौं। यो सर्वमान्य नियम भने होइन, बिरामीअनुसार लक्षण देखिने समय फरक हुनसक्छ। त्यसैले, लक्षण सुरू भएको दिनबाट कम्तिमा दुई साता आफ्नो शरीरमा देखिने परिवर्तनहरू मिहिन केलाउने र चिकित्सकसँग परामर्श लिनु सबभन्दा उत्तम उपाय हो।
त्यस्तै, जुन बिरामीमा लक्षण पनि गम्भीर थियो र अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएर श्वासप्रश्वास निम्ति कृत्रिम अक्सिजन चढाउनुपरेको थियो, उनीहरूलाई राम्ररी निको हुन लामो समय लाग्न सक्छ।